Urdun Oo Bandowgii Ugu Adkaa Ku Soo Rogtay shacabkeeda Xakamaynta Coronavirus Awgeed - Borama News Network %
Urdun Oo Bandowgii Ugu Adkaa Ku Soo Rogtay shacabkeeda Xakamaynta Coronavirus Awgeed
Urdun ayaa soo rogtay bandow adag oo aan caddeyn, taas oo dadka looga mamnuucayo inaysan guryahooda ka bixin karin wax kasta oo ay banaanka uga baahdaan si loo xakameeyo faafitaanka coronavirus.
Dowladda ayaa sheegtay in maamullada magaalooyiinka, shirkadaha iyo ganacsiyada ay dadka u geyn doonaan waxyaabaha aasaasiga ah, oo ay ka mid yihiin rootiga, biyaha, caanaha carruurta, dawada iyo shidaalka.
Qofkii jebiya bandowga wuxuu muteysan doona hal sano oo xabsi ah.
Dalkaasi waxaa laga soo sheegay 127 kiis oo fayraska Covid-19 ah, balse cidna uma dhiman.
Urdun waxaa ku nool 10 milyan oo qof waxayna martigelisaa illaa 1.3 milyan oo qaxooti Suuriya u dhashay ah.
Farriin muuqaal ah ayuu Boqor Cabdallaha Labaad ee dalkaas kalsooni ka muujiyay awoodda ay dadka Urdun u leeyihiin la dagaallanka fayraska.
Tallaabooyiinkan Urdun laga hirgeliyay waxaa ka mid ah kuwa ugu adag ee ay soo rogaan dalalka la dagaallamaya Covid-19, oo saameeyay in ka badan 330,000 oo qof isla markaana galaaftay nolosha ku dhowaad 15,000 oo qof.
Shacabka dalka Urdun sida ay safafka u galaan helidda rootiga
Dadka Urdun ayaa baraha bulshada iskula wadaagayay dad ku kala ordaya basaska, halka meelaha kalena ay dadku si nidaamsan safaf ugu galeen iibsiga rootiga.
Wasiirka Warfaafinta dalkaas Amjad Adaileh ayaa sheegay in 25,000 oo tan oo rooti ah la qeybiyay, isla markaana ay dadka ku filan tahay.
Iyadoo uu bandowgu bilowday habeennimadii Isniintii, ayaa Wasiirka Shaqaalaha Nidal Bataineh wuxuu sheegay in Cammaan, ay agwaari biyaha iyo rootiga u qeybin doonaan dadka, isla markaana biyo caagado ku jira la qeybin doono inta u dhaxaysa 09:00 ilaa 17:00 maalin walba.
Bacda rootiga oo 3kg ah wuxuu qiimaheedu yahay $1.35 (£1.16).
“Waxaan gaarsiin doonnaa qof walba iyo guri walba, muddo ka dibna waxaan qeybin doonnaa waxyaabaha kale,” ayuu yiri Mr Bataineh.
Qeybinta waxyaabaha kale sida digaagga, ukunta, bariiska iyo tubaakada ayaa bilaaban doonta Khamiista. Waxaana la yareyn doonaa qiimaha dadka loogu geeyo adeegga.
“Waxaan isku dayi doonnaa inaan guryaha dadka si toos ah u geyno, si looga hortago in waddooyiinka la tubnaado, taas oo ka hor imaaneysa amarka bandowga,” ayuu wasiirku yiri.
Dadka qaba xaaladaha kale ee xanuun ayaa laga doonayaa inay maamullada la xiriiraan.
Kumannaan ciidamo ah ayaa lagu daadgureeyay bar-koontaroollada magaalooyinka waaweyn si loola socdo bandowga.
“Waxaa jira dad aan ka warqabin baaxadda khatarta isla markaana jebinaya sharciga,” ayuu yiri afhayeenka ciidamada Janaraal Mukhles al-Mufleh, isagoo intaas ku daray in inka badan 800 oo qof la xiray tan iyo intii saddex maalmood oo bandow ah la soo rogay Axaddii.
Dadka sharciga jebiya ayaa labo toddobaad lagu heyn doonaa xabsiga kahor inta aan go`aan laga gaarin.
Wasiirrada ayaa ka walaacsanaa in qaaditaanka bandowga saacado kooban maalintii ay sababi doonto inay dadku safaf dhaadheer galaan si ay wax u iibsadaan, taasna ay sii faafin karto fayraska.
Toddobaadkii la soo dhaafay, Boqor Cabdallaha Labaad ee dalkaas ayaa soo saaray wareegto dowladda u oggolaaneya inay adeegsato awood.
Ra`iisul Wasaare Omar Razzaz ayaa codsaday in amarkaas la dhaqangeliyo iyadoo aan dadka laga qaadeynin xorriyadda siyaasadeed, xorriyadda hadalka iyo tan lahaanshaha hantida gaarka ah.
Dowladda ayaa hore u xirtay xudduudaha dhulka iyo hawada, isla markaana in ka badan 30 hoteel u beddeshay goobaha lagu karantiilo dadka dibadda ka imaanaya, waxayna sidoo kale xirtay ganacsiyada gaarka loo leeyahay iyo xafiisyada.
Xafiiska Wararka BoramaNews
Dhaxal Sugaha Boqortooyada Uk Oo Laga Helay Caabuqa Coronavirus
Dhul Gariir Xoogan Oo Ka Dhacay Jaziirad Lagu Muransanyahay Iyo Khasaaraha Ka Dhashay
“Xukuumadu Ha Cadayso Wariyayaasha Ay Shegtay In Ay Somaliya Mushaar Ka Qaataan ” Xildhibaan Nacnac
Bnnstaff Bnnstaff January 27, 2020
Dowlada Jabuuti Oo Markii Ugu Horaysay Ka Hadashay Xadhiga Internetka Ah Ee Rabto In Ay Mariso Xeebaha Somaliland
Bnnstaff Bnnstaff January 25, 2020
“Farmaajo Iyo Nimanka Xamar Joogaayi Ma Ogolo In Ay Shacabka Somaliland Noolaadaan” Wasiir Maxmed Kaahin
Bnnstaff Bnnstaff February 20, 2020
Madaxwayne Erdugan Oo Shaaciyay In Turkigu Gargaar U Fadinayo Dalalka Talyaaniga iyo Spain
Bnnstaff Bnnstaff March 31, 2020
Somaliya Oo Soo Saartay Amaro Cusub Oo Lagu Xakamaynayo Faafitaanka Coronavirus
Bnnstaff Bnnstaff March 31, 2020 March 31, 2020
Coronavirus could hit Africa worse than China, Bill Gate warns
@2019 - boramanews.com. All Right Reserved.